March 15, 2017 – Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya mudane, Xasan Cali Khayre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Madaxda ugu sareysa ee ciidanmada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee hawlgalka u jooga gudaha dalka Soomaaliya.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa Madaxdii uu la kulmay waxaa ka mid ahaa, Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ahna Madaxa hawlgalka Amisom, Amb. Francisco Madeira Caetano,Taliyaha Militariga Ciidamada Amisom, General Cismaan Nuur Subagle iyo Taliyaha Booliska Amisom, Anand Pillay.
Ra’iisal Wasaare Khayre ayaa waxa uu wafdiga u sheegay in dowladda cusub ay si dhaw ula shaqeyneyso ururka Amisom, iyagana laga doonayo in sidaas oo kale inay Dowladda Federaalka ugala shaqeeyaan hawlaha horyaalla.
Khayre ayaa ka dalbaday Madaxda Amisom inay dardar-geliyaan hawlaha ay u joogaan dalka Soomaaliya oo ah la dagaalanka Ururka Al-Shabaab.
Francisco Madeira ayaa isna madasha ka sheegay in Amisom dhankeeda ay si dhow ula shaqayn doonto Madaxda cusub ee Soomaaliya.